अख्तियार टोलि गाउँगाउँमा, घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि धमाधम समातिन थाले ! « Pokhara Pati
अख्तियार टोलि गाउँगाउँमा, घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि धमाधम समातिन थाले !
प्रकाशित मिति : २०७६ माघ १५, बुधबार
काठमाडौं, १५ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा हुने भ्र्रष्टाचारविरुद्धको निगरानीलाई तीव्रता दिन थालेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने क्रम बढेपछि अख्तियारले स्थानीय तहसम्मै पुगेर सक्रियता बढाउन थालेका हो । अख्तियार गाउँगाउँमा पुगेसँगै घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि धमाधम समातिन थालेका छन् ।
त्यस्तै, ११ माघमै सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका कार्यालयका इन्जिनियर दिलिपकुमार साहलाई १ लाख ६० हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले ट्रान्सफर जडानको विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । उनलाई अख्तियारले आफ्नो हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।